Wiil uu dhalay Qadaafi oo laga yaabo inuu madaxwayne kanoqdo Libya | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wiil uu dhalay Qadaafi oo laga yaabo inuu madaxwayne kanoqdo Libya
Saif Al-Gaddafi, oo ah wiilkii hoggaamiyihii hore ee Liibiya Muammar Gaddafi ayaa loo ogolaaday inuu u tartamo doorashada madaxweynenimo ee la qorsheeyay sanadkan gudihiisa, sida uu xaqiijiyay hogaamiyaha barlamaanka dalkaasi.
“Waxaannu hirgelinay sharciyo cafis iyo sharciyo ku saabsan joojinta go’doonka siyaasadeed. Hadda muwaadin kasta oo Liibiya, oo aan sharci ahaan lagu xukumin, wuxuu xaq u leeyahay inuu u tartamo madaxweynaha. Codeyntana waxa ay muujin doonta in Saif uu dadku caan ku yahay, “ayuu yiri Ciise.
Afhayeenka qoyska Qadaafi ayaa bishii December 2017 xaqiijiyay in Saif uu haysto taageerada iyo aqoonta si uu usoo afjaro rabshadaha waddanka tan iyo markii aabihii xukunka laga tuuray.
“Saif al-Islam Gaddafi, oo ah wiilkii madaxweynihii hore ee Liibiya, wuxuu haystaa taageerada qabiilada waaweyn ee Liibiya si uu ugu tartamo doorashooyinka madaxtinimada ee soo socda 2018,” ayuu yiri Basem al-Hashimi al-Soul.
Dhamaadkii kacdoonkii ka dhanka ahaa aabihiis, Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah ayaa soo saartay amar ah in la xiro Saif bishii Juunyo 2011 iyada oo lagu tuhunsan yahay dilka iyo dibad baxa rabshadaha watay. Isla dabayaaqadii sanadkaas , waxaa gacanta ku dhigay dagaalyahanada Liibiya oo afduub u haystay ilaa June 2017 marka oo la sii daayay.